ကြားဖူး ၊ ဖတ်ဖူးတာလေးတွေ
by bunny on Mon 16 Aug 2010, 12:39
တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာ
ကိုရင်တစ်ပါးကို တောင်အောက်လွတ်ပြီး ဆီအဝယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။
ကိုရင်ဆီမဝယ်ထွက်ခင် ဘုန်းကြီးက ဆီထည့်ဖို့ ခွက်တစ်လုံးပေးပြီး "
ကျောင်းမှာ အသုံးစရိတ် မလုံလောက်တဲ့အတွက် ဆီကို လုံးဝ မဖိတ်စင်အောင်
ဂရုတစိုက် ထည့်ခဲ့ပါ ကိုရင်" လို့ သတိပေး မှာကြားလိုက်တယ်။
ကိုရင်က တောင်အောက်ဆင်း ဆီဝယ်ပြီးနောက် တောင်ပေါ်ကို ပြန်လာလာခဲ့တယ်။
လမ်းမှာ ဘုန်းကြီးရဲ့ အမှာစကားကို ပြန်ကြားယောင်ပြီး လက်ထဲကဆီဖိတ်မှာ
အရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဆီခွက်ကိုပဲ စိုက်ကြည့်ပြီး
တောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်း တက်လာခဲ့တယ်။ ဘေးဘီကိုလဲ မကြည့်ရဲခဲ့သလို
ရှေ့ကလမ်းကိုလည်း မကြည့်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျောင်းရောက်ခါနီးမှာ
ရှေ့ကိုမကြည့်ခဲ့တာကြောင့် ချိုင့်တစ်ခုကို နင်းမိပြီး
ယိုင်လဲသွားခဲ့တယ်။ လက်ထဲကဆီ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် ဖိတ်သွားခဲ့တယ်။
ဘုန်းကြီးဆူတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကိုရင်ဟာ ကြောက်လန့်ပြီး
လက်တွေတုန်လာခဲ့တယ်။ ဆီခွက်ကို အငြိမ်မကိုင်နိုင်ခဲ့လို့ ဆီခွက်ဟာ
ဒါကို ဘုန်းကြီးကသိတော့ ကိုရင်ကို စိတ်ဆိုးပြီး "သေချာယူခဲ့ပါလို့
မှာထားရက်နဲ့ ဖိတ်ဖြစ်အောင်ဖိတ်ခဲ့သေးတယ်" ဆိုပြီး ဆူတော့ ကိုရင်
စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို တစ်ခြားဘုန်းကြီးတစ်ပါးက သိတော့
ကိုရင်ကိုခေါ်ပြီး နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ကိုရင်ကိုခေါ်ပြီး
"ကိုရင်ကို ဆီသွားဝယ်ခိုင်းအုန်းမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်သွားရင် လမ်းပေါ်မှာ
ကိုရင်တွေ့တဲ့ လူ၊ ပစ္စည်းမှန်သမျှ ဘုန်းကြီးကို ပြန်လျှောက်ရမယ်" လို့
ဘုန်းကြီးစကားကို ကြားတော့ ကိုရင်က မသွားချင်ခဲ့ဘူး။ ပထမတစ်ခေါက်က
ဆီခွက်ကို မဖိတ်အောင် မယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ဒီတစ်ခေါက်က ဘေးဝဲယာကို
ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ ဒီအလုပ်ကို သူလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်နေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် မဖြစ်မနေ သူသွားခဲ့ရပြန်တယ်။
ဆီဝယ်ပြီး အပြန်လမ်းမှာ ကိုရင်က ဘေးဝဲယာကို ကြည့်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားနေကြတဲ့ ကလေးတွေ၊ တောတောင်ရဲ့အလှကို ခံစားရင်း၊
လယ်သမားတို့ရဲ့ လှေကားထစ် စိုက်ခင်းတွေကို ကြည့်ရှုရင်း စိတ်တွေက
ပေါ့ပါးနေခဲ့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလှမှာ နစ်မျှောနေခဲ့လို့
ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ သူရောက်လို့ရောက်လာမှန်း မသိခဲ့ဘူး။
မီးဖိုချောင်ရောက်တဲ့အထိ ခွက်ထဲက ဆီက တစ်စက်မှတောင် မဖိတ်ခဲ့ပါဘူး။
သတိထားလေ အမှားလုပ်မိလေပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင်ယူချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊
အလုပ်ချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပြီး အတွေ့အကြုံအတွက်
သင်ယူလေ့လာနိုင်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပါ။ အတွေ့အကြုံထဲကနေ ဘဝရဲ့
ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေတတ်သူတွေကမှ စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှု၊ စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့
ကင်းဝေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒီပုံပြင်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Re: ကြားဖူး ၊ ဖတ်ဖူးတာလေးတွေ
by bunny on Mon 16 Aug 2010, 12:43
ဂျပန်စာရေးဆရာ Lily Franky ရေးထားတဲ့ "တိုကျိုတာဝါ" စာအုပ်ကို စာရေးဆရာမ
Heng Cao (曹姮) က တရုတ်လို ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူက သူ့စာမှာ
Lily Franky က သူငယ်စဉ် မိခင်နဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေကို
ရိုးရှင်းတဲ့ အဖွဲ့အနွဲ့၊ မခန့်ညားတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်နေချိန်မှာ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ မြို့ပြရဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို
စာဖတ်သူရဲ့ ဦးနှောက်ထဲ တရေးရေး မြင်ယောင်စေသလို အဲဒီရှုခင်းတွေရဲ့
နောက်မှာ စာရေးသူ (Franky)အတွက် အမြဲ တစ်ကုပ်ကုပ် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့
ဂျပန်မှာ ဒီစာအုပ်ကို အုပ်ရေသိန်း၂ဝကျော် ရောင်းခဲ့ရပါတယ်။ လူတစ်ချို့က
ဒီစာအုပ်ဟာ မိခင်ကိုစွဲလမ်းတဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ အပြီးသတ် အကောင်းဆုံး
စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးတဲ့ ဂျပန်ယောက်ျားတိုင်း
မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မသိတဲ့ ဂျပန်အဘိုးအိုတစ်ဦးက ဒီစာအုပ်ကို
အရမ်းဖတ်ချင်ပေမယ့် သုံးလေးမျက်နှာသာဖတ်ပြီး ဆက်ဖတ်နိုင်စွမ်း
မရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာက သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ့
တူနေကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီအဘိုးအိုက အသက်၆၅နှစ် ရှိနေပေမယ့် ဒီနေ့အထိ
အိပ်ယာထက်မှာ လဲနေတဲ့ မိခင်ကို ကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မိခင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေ နီလာပြီး မျက်ရည်တွေ
မိခင်ကောင်းတွေက မိခင်ကိုစွဲလမ်းတဲ့သားတွေ မွေးထုတ်ပေးတယ်?
ဘာဖြစ်လို့ ဂျပန်ယောက်ျားတွေရဲ့ မိခင်ကိုစွဲလမ်းတဲ့ အစွဲအလမ်းက
တစ်ခြားလူတွေထက် ပိုရသလဲ? ဒါကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစရိုက်နဲ့
ဖွဲ့စည်းပုံကနေ ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီခေတ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ စက်မှုပညာ
ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေဟာ
အိမ်ထောင်ကျတာနဲ့ လင်သားကိုပြုစုတဲ့ အိမ်ရှင်မဘဝကို
ရွေးခြယ်လိုက်တော့တယ်။ "အိမ်ရှင်မ ပီသသူ" က "မိခင်ကို စွဲလမ်းတဲ့သား" တွေ
မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ရင်းမြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိသားစုကို ဦးစားပေးတဲ့မိခင်တွေ၊
သားသမီးကို ဂရုစိုက်မှု ပိုပေးတဲ့ မိခင်တွေကြောင့် ကလေးတွေဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက
မိခင်ကိုပိုစွဲလမ်း၊ ပိုချစ်ခဲ့ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေက
ကြီးပြင်းလာသည့်တိုင် မိခင်ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့ စွဲလမ်းမှုမျိုးကို
နောက်အကြောင်းတစ်ခုက ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသက်ပိုရှည်ကြတာနဲ့လည်း
ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စာရင်းပြုစုချက်အရ ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့
ပျှမ်းမျှအသက်က ၈၅နှစ်အထိ ရှည်နိုင်ကြပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိခင်ရဲ့
အပြုအစု၊ ဂရုစိုက်မှုကို ခံရပြီး မိခင်ကို မှီခိုနေထိုင်တဲ့ "Neet"
လူမျိုးစုတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေထိုင်ကြီးပြင်းတဲ့ အင်အားတွေ
မဲ့ခဲ့ရတယ်။ ဖခင်သေဆုံးပြီးနောက် မိခင်နဲ့အတူ နှစ်ယောက်အတူ
နေရတဲ့အချိန်တွေ ပိုများပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့သားတွေက
အမေရဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကို ပိုရခဲ့တယ်။ မိခင်နဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့တဲ့
ယောက်ျားတွေက မိခင်ရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖို့
မိခင်ကို စွဲလမ်းတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို မကြောက်ပါနဲ့
ဟိုအရင်တစ်ချိန်က မိခင်ကိုစွဲလမ်းတဲ့ ဂျပန်ယောက်ျားမျိုးကို ကျွန်မလည်း
အမြင်စောင်းခဲ့ဖူးတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ "အဲဒီယောက်ျားက သူ့အမေကို
ချစ်လွန်းနေတယ်။ သူ့ကို ယူလို့မဖြစ်ဘူးနော်" စတဲ့ စကားကို အမြဲ
ကြားရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အမေ့ကိုစွဲလမ်းတတ်တဲ့ လူတွေမှာ နိုင်ငံ၊
ဒေသခွဲခြားလို့ မရပါဘူး။ "ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေကို မချစ်တဲ့၊
မစွဲလမ်းတဲ့သားဆိုတာ မရှိဘူး" လို့ ကျွန်မတို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
"ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေကို မချစ်တဲ့၊ မစွဲလမ်းတဲ့သားသမီးဆိုတာ မရှိဘူး" ဆိုရင်
ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ အမေကိုချစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်မပြောရုံ၊ အမှုအရာ မပြရုံဘဲ
ကွာပါလိမ့်မယ်။ အမှုအရာ အေးစက်၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ယောက်ျားတွေထက်စာရင် အမေကို
စွဲလမ်းတဲ့ ယောက်ျားတွေက ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်။
စာရေးဆရာ Lily ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ အမေသေဆုံးသွားပြီးမှ ဘာကြောင့် အစကတည်းက
အမေ့ကိုချစ်ကြောင်း မပြောဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီး နောင်တရကြောင်း
ရေးသားထားပါတယ်။ အမေ့ကိုချစ်လွန်းတဲ့ ရွံ့ရှာဖွယ်သားအဖြစ် လူတွေ
ကဲ့ရဲ့ကြမှာစိုးလို့ မပြောဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ထဲက
ခံစားချက်ကို ဖုံးဖိထားခဲ့ရတယ်။ တကယ်လို့ အခြားလူရဲ့ အစွေအစောင်း
အကြည့်တွေကို သူဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အမေနဲ့သူဒီ့ထက် ပိုရင်းနှီးမယ်၊
အမေနားမှာနေပြီး အမေ့ကို ဂရုစိုက်စကားတွေ ပြောဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ အမေ့ကိုချစ်တဲ့၊ စွဲလမ်းတဲ့သားက ကြောက်စရာ တစ်စက်မှ
မကောင်းပါဘူး။ သူတို့မှာ တစ်ခြားလူထက် ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ခံစားချက်တွေ
သင့်မှာ မိခင်ကိုချစ်ခင် စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ
စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်.. Yes, No ထဲက အဖြေတစ်ခုကို ရွေးပေးပါ။
၁) ငယ်စဉ်ကတည်းက စကားနားထောင်ပြီး လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ မကြာခဏ ချီးကျူး ခံရဖူးတယ်။
၂) မေမေဝယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို သင့်ကိုယ်ပေါ်မှာ အချိန်မရွေး
တွေ့နိုင်တယ်။ (yes ) (No)
၃) နေ့တိုင်း မေမေနဲ့ စကားငါးခွန်းအထက် ပြောဖြစ်တယ်။ (yes ) (No)
၄) မကြာခဏ မေမေနဲ့အတူ ဈေးဝယ်ထွက်ဖြစ်တယ်။ (yes ) (No)
၅) စိတ်ညစ် ဝမ်းနည်းစရာတွေ ကြုံတိုင်း မေမေကို အရင်သတိရမိတတ်တယ်။ (yes ) (No)
၆) "ငါ့မေမေကပြောတယ်" ဆိုတဲ့ စကားကို အကျင့်တစ်ခုလို သုံးစွဲတတ်တယ်။ (yes ) (No)
၇) သင်ဟာ အစာဂျီးများသူ (အစာရွေးသူ) ဖြစ်တယ်။ (yes ) (No)
၈) သင့်အပြင်ပန်းက ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဆိုပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ရဲ့
(yes ) (No)
၉) ဖေဖေကို သိပ်မချစ်ဘူး။ (yes ) (No)
၁ဝ) မေမေက အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်တယ်။ (yes ) (No)
မေးခွန်း (၁ဝ) ခုလုံးကို No လို့ ဖြေခဲ့သူ
သင့်မှာ မိခင်ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ဝ% ပဲရှိပါတယ်။ သင်နဲ့
yes လို့ ၁ မှ ၃ ခုအထိ ဖြေခဲ့သူ
သင့်မှာ မိခင်ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ၃ဝ% ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေ
သီးခံလောက်တဲ့ အဆင့်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် "ရိုသေတဲ့ သားသမီး"
yes လို့ ၄ မှ ၆ ခုအထိ ဖြေခဲ့သူ
သင့်မှာ မိခင်ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ၆ဝ% ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ မိခင်ကို
မတော်လှန်တတ်သူဖြစ်တယ်။ မေမေက သင့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးဆုံးနေရာမှာ
ရှိခဲ့ပါတယ်။ မေမေကို ယုံကြည်မှီခိုတတ်တဲ့ သားသမီးလိမ္မာ ဖြစ်ပါတယ်။
yes လို့ ၇ မှ ၉ ခုအထိ ဖြေခဲ့သူ
သင့်မှာ မိခင်ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ၉ဝ% ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားလူ
သီးခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်ပြီး မိခင်ကို
နှစ်သက်စွဲလမ်းသူဖြစ်တယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အရိပ်တကြည့်ကြည့် ခံရသူဖြစ်ပြီး
ဘာကိစ္စမဆို မိခင်ကို အားကိုးတတ်သူဖြစ်တယ်။ မေမေ မရှိရင်
အသက်မရှင်နိုင်တဲ့ အမျိုးအစားထဲက ဖြစ်တယ်။ တကယ်လိုသင်ဟာ မိခင်နဲ့
အမြဲအတူနေတဲ့ ယောက်ျားလေးဆိုရင် သင်ယူမယ့် မိန်းကလေးအတွက် ယောက္ခမနဲ့
ချွေးမကြားက ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပွါးစေနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း(၁ဝ)ခုစလုံး yesလို့ ဖြေခဲ့သူ
သင့်မှာ မိခင်ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ၁ဝဝ% အပြည့် ရှိပါတယ်။
ဒီလိုယောက်ျားမျိုးက မိန်းမ မယူနိုင်လောက်အောင် မိခင်ကိုပဲ
အစွဲလမ်းလွန်သွားပါတယ်။ မေမေထက်ကောင်းတဲ့မိန်းမ ဒီလောကမှာ
မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်သူဖြစ်တယ်။ တစ်ခြားမိန်းကလေးထက် မေမေရှိနေရင်
အရာရာပြည့်စုံပြီလို့ ထင်သူဖြစ်တယ်။ ကုစရာဆေးမရှိလောက်အောင် မိခင်ကို
ချစ်ခင်၊ နှစ်သက်၊ စွဲလမ်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။
by bunny on Mon 16 Aug 2010, 12:47
ဖိနပ်ကို အမျိုးမျိုးသော ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ကြတယ်။ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံးဖိနပ်က ငှက်ပျောရွက်နဲ့ လုပ်တာဖြစ်နိုင်သလို တန်ဖိုးအကြီးဆုံးနဲ့ အရှားပါးဆုံးက စင်ဒရဲလားရဲ့ လက်လက်ထနေတဲ့ ဖိနပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုဖိနပ်မျိုးဖြစ်ဖြစ် အဓိက,က ခြေထောက်နဲ့တော်ဖို့၊ ကိုက်ညီဖို့ဖြစ်ပြီး ဘယ်လို အိမ်ထောင်ရေးမျိုးဖြစ်ဖြစ် အဓိက,က စည်းချက်ညီဖို့နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက နာမည်ကြီးတံဆိပ် ဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ လှပပြီးအဖိုးတန်သလို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ လူကိုကြည်နူးစေတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုးကြီးမားပြီး လှပတာကြောင့် ရွံ့အပေမခံဘူး။ ရွံ့နည်းနည်းပေတာနဲ့ ကြည့်ရရုပ်ဆိုးတာကြောင့် အမြဲတမ်းဂရုတစိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရတယ်။ တန်ဖိုးထားရတယ်။
ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်အိမ်ထောင်ရေးက အဝတ်စနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး တန်ဖိုးမကြီးပေမယ့် စီးလို့ကောင်းတယ်။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပေါ့ပါးပြီးသွက်လက်စေတယ်။ တခြားလူ ယူသွားမှာလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် စီးတဲ့အချိန် သိပ်လျောလျောရှူရှူ ဖြစ်မနေတတ်ဘူး။
ဆင်းရဲဒုက္ခကို အတူတကွဖြေရှင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက အားကစားဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ ပုံစံဆန်းပြီး စီးရတာလည်း သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ အကောင်းဆုံးအချက်က လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်၊ ရွံ့နွံ့ဒဏ်ကိုခံရလည်း ဖိနပ်အောက်ခံ ပျက်စီးသွားတာမျိုး မရှိဘူး။ စီးလိုက်တိုင်း ခြေထောက်နဲ့တသားတည်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုဆူးခင်းလမ်း၊ ခရောင်းတောလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ခြေထောက်ကို မပွန်းပဲ့စေဘဲ တာရှည်ခိုင်မြဲစေပါတယ်။
ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက အကဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ ပေါ့ပါး၊ တက်ကြွပြီး ကြော့ရှင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောင်ချောတဲ့ အကခွင်ကြမ်းပြင်ကခွါတာနဲ့ ဒီလိုဖိနပ်မျိုးက စီးလို့အသုံးမဝင်တော့သလို စီးရတာလည်း ခက်သွားပါတယ်။
စီးပွါးဆန်အိမ်ထောင်ရေးက အပြေးဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းနောက် ထပ်ကြပ်မခွါလိုက်ပြီး စောင့်ရှောက်တယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးတယ်။ ဒါပေမယ့် စီးပွါးရေးပြေးလမ်းက ခွဲထွက်သွားတာနဲ့ စီးလို့မကောင်းတော့ပါဘူး။
အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့ အသက်ငယ်တဲ့မိန်းမတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ခုံမြင့်ဖိနပ်ဖြစ်တယ်။ ခရီးဝေးအတွက် စီးလို့မသင့်လျော်ပေမယ့် ကြည့်ရတာထူးခြားတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့မိန်းမနဲ့ အသက်ငယ်တဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ညအိပ်ဖိနပ်နဲ့တယ်။ ကြည့်ရတာ ရယ်ချင်စရာကောင်းနေပေမယ့် စီးရတာအဆင်ပြေတယ်။ ချွတ်ရတာလည်း လွယ်ကူတယ်။ ဒီလိုဖိနပ်မျိုးကို အိမ်မှာပဲစီးရအဆင်ပြေတယ်။ အပြင်စီးထွက်ရင် လူပြောစရာဖြစ်တယ်။
ပွင့်လင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးက လွှာချင်းဖိနပ်(sandal)နဲ့တူတယ်။ ရာသီမရွေး စီးလို့ရတယ်။ ခံစားချက်တွေ ပူနွေးစေတဲ့နွေရာသီမှာ ခြေထောက်ကို အေးမြစေတဲ့လွှာချင်းဖိနပ်ကို စီးထားနိုင်ပြီး ခံစားချက်တွေ အေးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာ ဖိနပ်ကိုချွတ်ထားလို့ရပါတယ်။
ဖောက်ပြန်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးက အိမ်နေစီးဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ စီးလို့ကောင်းတယ်၊ လွယ်ကူအဆင်ပြေတယ် ဆိုပေမယ့် အပြင်စီးထွက်လို့မရဘူး၊ လမ်းမကြီးပေါ်လျှောက်လို့မရဘူး။ ခရီးဝေးဝေးသွားလို့ မဖြစ်ဘူး။
ငွေမက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးက နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ထိပ်ချွန်ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့ ဖိနပ်မျိုးနဲ့တူတယ်။ ကြည့်ရတာ လှပပေမယ့် စီးလို့မကောင်းဘူး။ စီးလိုက်တာနဲ့ စီးရအဆင်မပြေဘဲ ခြေထောက်နာတတ်တယ်။
အတင်းအကျပ်လုပ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက သံဖိနပ်နဲ့တူတယ်။ ကြီးလေးပြီး ရှေ့ကိုလျှောက်လှမ်းဖို့ ခက်ခဲစေတယ်။ ချွတ်ပစ်လည်း ခြေကြော၊ ခြေရိုးတွေကို နာကျင်စေတယ်။ အသားတွေကို ပွန်းပဲ့စေတယ်။
အားရကျေနပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုရွေးချယ်တာက စီးလို့ကောင်းတဲ့ ဖိနပ်တစ်စုံကို ရွေးယူတာနဲ့တူတယ်။ အဓိက,က ခြေထောက်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ ဖိနပ်အတိုင်းအတာ ကိုက်ညီဖို့ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုခြေထောက်မျိုးက ဘယ်လိုဖိနပ်မျိုး စီးရင်သင့်တော်မလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလိမ့်မယ်။
သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဖိနပ်က ခြေထောက်ကို မပွန်းပဲ့စေဘူး။ ဒါပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဖိနပ်တိုင်းလှပရမယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖိနပ်စီးရတာ အဆင်ပြေမပြေ စီးတဲ့ခြေထောက်ကပဲသိပါတယ်။ ခရီးဝေးသွားရင် ဖိနပ်စီးမှားမှာကို လူတိုင်းကြောက်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုရင် လူတိုင်းအနိုင်ကျင့်ခံရမှာကို ကြောက်ကြတယ်။ ဖိနပ်က ခြေထောက်ကိုအရမ်းပွန်းပြီး နာကျင်စေခဲ့ရင် ဖိနပ်အောက်ခြေ မပါးခင်၊ ခြေထောက်လည်း မထိခိုက်ခင် သင့်လျော်တဲ့အသစ်တစ်ရံကို ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့မသင့်လျော်တဲ့ အဖိုးတန်ဖိနပ်ကို စီးထားတာဟာ ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင် လုပ်တာနဲ့တူတယ်။ သူတစ်ပါးက ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလှပတဲ့ဖိနပ်ကို တွေ့မြင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် စီးထားတဲ့ကိုယ့်ခြေထောက် နာကျင်တာကို ကိုယ်ပဲသိပါတယ်။ ခြေထောက်က ဖိနပ်ထက်အရေးပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့က တန်ဖိုးကြီးလှပတဲ့ ဖိနပ်ကြောင့် ဒီအချက်ကို မေ့ခဲ့ကြတယ်။
ရေခဲစကိတ်စီးရင် စကိတ်စီးဖိနပ်ကို စီးရတယ်။ နှင်းတောကြားမှာ နှင်းဖိနပ်ရှည်ကို စီးရတယ်။ ခရီးဝေးသွားရင် ခရီးသွားဖိနပ်ကို စီးရတယ်။ လောကကြီးမှာ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ဖိနပ်တွေအများကြီး ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးယူနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်က တစ်စုံပဲရှိတာမို့ ကိုယ့်ခြေထောက်နာစေတဲ့ဖိနပ်မျိုး အရွေးမမှားစေချင်ပါဘူး။
အသက်အရွယ် အကန့်အသတ်တစ်ခုထိ ခြေထောက်တွေ ရှည်လျားကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိနပ်တွေက မပြောင်းလဲပါဘူး။ ခြေထောက်နဲ့ဖိနပ် ဘယ်အရာက အင်အားကြီးသလဲ? ခြေထောက်ကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖိနပ်ရိအောင်၊ ပွန်းအောင် ခြေထောက်ကပဲ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာ ခြေထောက်ဆက်မကြီးထွားတော့တဲ့ အချိန်က ကျွန်မတို့ ရင့်ကျက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်တဲ့ ဖိနပ်တစ်မျိုးကို ရွေးဖို့အချိန်ကျပါပြီ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်က ယောက်ျားဆိုရင်၊ နောက်တစ်ဖက်က မိန်းကလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိနပ်က အဲဒီခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို တစ်စုံဖြစ်အောင် အတူတကွ ပေါင်းစည်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘဝခရီးဆုံးခန်းတိုင်ထိ လျှောက်လှမ်းကြရပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်တဲ့ဖိနပ်ကမှ ပိုဝေးတဲ့ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။